Archive du 20190705
Nampihinanin’ilay vazaha maloto ny sipany
Anisan’ireo tranga mamoafady nihatra tamina vehivavy Malagasy nisakaiza tamina teratany vahiny iray ny fampihinanana maloto.
Praiminisitra Ntsay Christian Sarotra ny hanilika azy
Aao anatin’ny heriny tanteraka ny IRD ary inoana fa misy manonofy ho praiminisitra ao. Mora kokoa ho an’ireo depiote IRD etsy Tsimbazaza ny mifandresy lahatra sy mamoaka olona avy amin’izy ireo na olona tena iray antoko sy vondron’antoka aminy hitana io toerana io.
Depiote tsy miankina nanao fanambarana “Mitady sera sy tsena”
Fomba fiady efa nampoizina ihany, raha ny fanazavan’ny sekretera nasionalin’ny antoko politika ABA, Dany Rakotoson, no nipoitra nandritry ny fanambaran’ireo kandida tsy miankina sasany izay nilaza fa hanohana ny filoham-pirenena.
Filoham-pirenena Manao pi-maso ny faritra iva hatrany
Tonga nijery ny fanatsarana natao tao amin’ny fokontany Tsaramasay, Ankorondrano Andrefana, Ankorondrano Andranomahery ny filoham-pirenena mivady, niaraka tamin’ny lehiben’ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana na BAD, Akinwumi Adesina, omaly.
Fifidianana ben’ny tanàna Ho avy indray ny kitoatoa sy hosoka ?
Tonga tamin’ilay hoe : « azo raisina fa tsy mitombina » ihany ny voka-pifidianana ofisialy navoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), fa ny fomba nentina nanehoana azy no niova, rehefa tena halalinina. Nitombina tanteraka ny hoe tsy hifanala baraka sy hifandentika velively ny HCC sy ny CENI.
Tontolo politika Mbola feno fitaka hatrany
Mba hanao ahoana ny hoavin`ny tontolo politika eto Madagasikara ? Fanontaniana mbola saro-baliana.
Fanjakana sy Kaominin’Antananarivo Renivohitra Tsy afaka miara-miasa mihitsy ve ?
Mikorontana tanteraka Antananarivo. Tsy voahaja ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, miverina amin’ny laoniny manao izay tiany ny posy sy ny sarety, ny fitohanan’ny fiara goavana n’aiza n’aiza aleha. Ny olona sy ny biby fiompy mifanaretsaka eny an-dalambe. Mipoitra etsy sy eroa ary
Ady amin’ny fanondranana andramena Misy “task force” natsangana indray
Miroso hatrany amin’ny fiarovana ireo harena voajanahary mampiavaka antsika eto Madagasikara ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny haivoary.
Seranam-piaramanidina Ivato 1Euro raha mila ireo mpitaona entana
Taorian’ny fanafoanana ireo mpitatitra entana mangataka "pourboire" be loatra amin'ireo mpandeha dia novaina ny fomba fiasa ao amin’ny seranam-piaramanidina eny Ivato.
BAREA JIOI 2019 Hiantehitra amin’ny «Jeux Collectif », hoy i Rôrô
Tazana nanohy ny fanazarantenany tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina omaly alakamisy 04 jolay 2019 ny Barea JIOI «Barea handeha hiatrika ny fifaninanana baolina kitra any amin’ny lalaon’ny nosy 2019 any Maorisy ».
Lalaon’ny nosy 2019 « volet Jeunesse » Manoman-tena fatratra ny tanora Malagasy
Iray amin’ireo taranja hifaninanan’ny Malagasy any amin’ny lalaon’ny nosy andiany faha-10 hotontosaina any Maurice manomboka amin’ny 19 ka hatramin’ny 28 jolay 2019 izao ny « volet Jeunesse ».
Taksibe tsy manara-dalàna Mbola mitohy ny fanasaziana
Zavatra iray lehibe hita eto Antananarivo ny fanamboarana ireo lalana mihazo ny lalam-pirenena, hoy ny talen’ny fitaterana sy fifamoivoizana eto Antananarivo Renivohitra, Landy Raveloson.
Fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Tetikasa 80 no notohanan’ny PROCOM
Nikatona tamin’ny fomba ofisialy omaly alakamisy 4 jolay tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ilay tetikasa PROCOM izay vatsian’ny vondrona Eoropeanina vola.
Lalam-pihariana makamba Miantoka ny 55% ny fanondranana hazandrano
Nosokafan’ny minisiteran’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono omaly alakamisy 4 jolay tetsy amin’ny Ibis Hotel Ankorondrano ny atrikasa iraisam-pirenena haharitra roa andro momba ny Makamba sy ireo hazandrano.
Fampindramam-bola madinika Manampy ny Malagasy amin’ny tetikasany
Sahirana ary tena sahirana ny Malagasy amin’izao fotoana izao. Maro ny miasa tena sy manao izay hahavelona azy fotsiny. Olana ny tsy fahampian’ny vola aodina hanaovana fandraharahana.
Frantsa-Italia Tapaka ny zotran-dalamby TGV
Ho tapaka ny zotran-dalamby haingam-pandeha mampitohy an’i France-Italia hatramin’ny 31 jolay
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Hanampy an’i Madagasikara ny BAD
Nijery ifotony ny fanatsarana ara-potodrafitrasa teny amin’ny fokontany Tsaramasay, Ankorondrano Andrefana, Ankorondrano Andranomahery ny filoham-pirenena mivady, niaraka tamin’ny filohan’ny vondron’ny BAD (Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana), Atoa Akinwumi Adesina omaly alakamisy 4 jolay 2019.
Olona naratra teny Mahamasina Dimy ireo mbola tazonina ao amin’ny HJRA
Mbola miisa dimy hatreto ireo olona naratra mafy vokatry ny fifanosehana niseho tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina tamin’ny 26 jona hariva teo, tazonina etsy amin’ny hopitaly HJRA, hoy ny profesora Rakoto Alison Olivat.
Vaky fasana Ambohimalaza Taolam-paty maro no lasan’ny jiolahy
Naharay antso avy amin’ny lehiben’ny fokontany Ambohimalaza Miray ny zandary teo an-toerana fa nisy fasana vaky.